Qalabka Soo-kabashada Furaha Muuqaalka Muuqaalka. PST Soo Celinta Password Software.
DataNumen Outlook Password Recovery waa aalad awood leh oo ka soo kabanaysa erayga sirta ah faylalka la duubay ee Outlook PST Haddii aad ilowdo erayga sirta ah ee faylka PST ee sirta ah, markaa qalabkan, waxaad si fudud ugu soo kaban kartaa lambarka sirta ah oo aad ku heli kartaa waxyaabaha ku jira faylka PST.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,585 cod)
maxaad DataNumen Outlook Password Recovery?
Waxaan qaatay 5 saacadood maanta anigoo raadinaya degel soo bandhigta Soo-kabashada Muuqaalka Muuqaalka Bilaashka ah ama qaaliga ah. Ugu dambeyntii waan helay DataNumen in si fiican
Waxaan calaamadeyn doonaa boggaaga haddii aan u baahanahay inaan soo iibsanno midkood
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Taageer Microsoft Outlook 97 illaa 2019 iyo Muuqaalka loogu talagalay Office 365 faylasha PST ee la duubay.
Taageero si aad uga soo ceshato ereyada sirta ah ee dufcado ah faylasha PST ee sirta ah.
Ku dhexjiray qolofka Windows, sidaa darteed waxaad ku soo ceshan kartaa lambarka sirta ah ee faylka PST ee qarsoodi ah oo leh macnaha guud (guji) menu Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen Outlook Password Recovery inuu ka soo ceshano ereyada sirta ah faylasha 'Windows XP'
Marka feylkaaga PST la kaydiyo oo aad ilowdo lambarkiisa sirta ah, waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Password Recovery si loo baaro feylka PST loona soo celiyo lambarka sirta ah.
Fiiro gaar ah: Ka hor intaadan ka soo kaban ereyga sirta ah faylka 'Windows XP PSP' ee sirta leh DataNumen Outlook Password Recovery, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah ee wax ka beddeli kara faylka PST.
Xullo feylka Muuqaalka PST ee sirta ah oo lambarkiisa sirta ah la soo ceshan karo:
Waxaad ku qori kartaa magaca faylka PST si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad uga heshid faylka PST ee sirta ah kombiyuutarka deegaanka.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Password Recovery doonaa start iskaanka iyo dib u soo celinta lambarka sirta ah ee faylka PST ee sirta ah. Bar horumarka
Kadib dib u soo kabashada, haddii lambarka sirta ah ee faylka PST ee sirta ah si guul leh loo soo kaban karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad riixi kartaa ah badhanka si aad u nuquliso lambarka sirta ah ee sabuuradda, ka dibna u isticmaal inaad ku furto oo aad ku gasho feylka PST ee sirta ah ee Muuqaalka.
Fiiro gaar ah: Furaha sirta ah ma noqon karo mid la mid ah kii aad isticmaashay, laakiin wuxuu furi karaa faylka PST ee sirta ah iyada oo aan wax dhibaato ah qabin.
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 9th, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.1 waxaa la sii daayay Juun 17th, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.0 waxaa la sii daayay Oktoobar 20th, 2014
Taageer Microsoft Outlook 97 ilaa 2016 faylasha PST ee la duubay.